Fotoana izao amin'ny famerenanao ny famerenam-barotra amin'ny faran'ny taona | Martech Zone
Fotoana izao amin'ny famerenanao ny famerenam-barotra farany
Alarobia, Desambra 9, 2009 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Fotoana indray izao ny taona… rehefa ianao dia tsy maintsy manokana fotoana hijerena ny drafitra ara-barotra isan-taona. Amin'ny herintaona dia mety ho zava-dehibe kokoa noho ny tamin'ny taona lasa ny fananganana haingana ny paikadin'ny media sosialy. Ity no soso-kevitro fanangonana:
Fandaniana amin'ny marketing amin'ny Medium - ity dia vola tena aloa amin'ny ezaky ny varotra ivelany sy ny doka. Ny famotehana an'io ao anatin'ny sokajy dia ilaina ihany koa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia aza asiana lisitra fotsiny hoe 'an-tserasera'… mandrava tranonkala an-tserasera, marketing amin'ny motera fikarohana, media sosialy, sns.
Marketing Resources Nandany tamin'ny Medium - ity dia vidin'ny loharanom-pahalalana anatiny amin'ny tànan'olombelona ary koa ny kojakoja sy fitaovana. Avereno indray, alao antoka fa hampilatsaka ny medium tsirairay hatrany amin'ny denominatera iraisana ambany indrindra.
Fividianana mpanjifa na varotra vokatra amin'ny Medium - io dia isan'ny isa isa sy vola azo voangona arakaraka ny salantsalany… ampidiro ny referral sy ny vava. Ny fahalalana ny isan'ny mpanjifa, ary koa ny lanjan'ireo mpanjifa ireo, dia tena ilaina amin'ny fandaminana ny taona ho avy. Ny mpanelanelana sasantsasany dia mety hitondra isa kely kokoa… fa ny fifanarahana lehibe kokoa.
Fitanana ny mpanjifa amin'ny Medium - Mety mila ezaka fanampiny izany, saingy azonao ny zavatra ataon'ny orinasanao izay misy fiatraikany amin'ny fitazonana ny mpanjifanao. Imbetsaka ny programa fanabeazana sy ny consultations no jerena ho fandaniam-bola. Fantaro ny sandan'ny serivisy omenao tsy andoavam-bola… azonao jerena eto ny tombony be indrindra!
Fampitahana mandritra ny taona - nanao ahoana ny paikadim-barotra nataonao raha oharina tamin'ny taona lasa? Afaka miloka tanteraka ianao fa hiova indray izy amin'ny taona ho avy! Ny fanovana ny fifangaroan'ny haino aman-jery, ny loharano ary ny paikadinao dia hampitombo ny fiverenanao amin'ny marketing.
Aza manadino ny famerenana marketing amin'ny faran'ny taona. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mandany vola amin'ny marketing izay ananany loharanon-karena, aiza izy ireo mieritreritra ny vola miditra dia avy, na avy aiza izy ireo no mahazo aina indrindra. Ny fanatanterahana ny famerenana amin'ny faran'ny taona dia hanome anao ireo fitaovana ilainao hanafika amin'ny herintaona miaraka amin'ny paikady vaovao mandresy!
Tags: Analyticsisan-taonatatitra isan-taonafiafaran'ny taonafanontaniana momba ny marketingfamerenana marketingtaona vaovaoisan-taonafamerenana amin'ny faran'ny taona
Enina ambaratonga fanatsarana ny haino aman-jery sosialy
Inona no hitanao amin'ny milina fikarohana?